Kooxda AC Milan oo doonaysa inay bisha Janaayo soo qaadato labo xiddig ka tirsan Real Madrid – Gool FM
(Milano) 03 Nof 2019. Kooxda AC Milan ayaa lasoo warinayaa inay labo xiddig oo da’yar ah ee ka tirsan Real Madrid amaah kula soo wareegayso suuqa kala iibsiga bisha Janaayo ee soo aaddan.
Waxaa dhowaan la soo wariyey in Milkiileyaasha Kooxda Rossoneri ay diyaar u yihiin inay xoojiyaan kooxda suuqa jilaalka ee soo aaddan kaddib markii qaab liita ay kaga bilowdeen xlili ciyaareedkan, isla markaana ay la kulmeen shan guuldarro 10 kulan oo ay ciyaareen.
Sida ay warinayso “Calciomercato.com”, Paolo Maldini iyo Zvonomir Boban, si la mid ah agaasimaha ciyaaraha ee Ricky Massara ayaa dareenkooda u weeciyay Real Madrid markale ka dib markii ay xagaagii kala soo saxiixdeen Theo Hernandez kooxda reer La Liga isla markaana ay kaga soo qaateen adduun dhan 20 milyan oo euro.
Wararku waxa ay intaa ku darayaan in Kooxda AC Milan ay xiiseynayso labada weeraryahan Vinicius iyo Brahim Diaz, iyadoo xiddiga reer Brazil ee Vinicius uu kaliya 10 kulan u saftay Los Blancos xilli ciyaareedkan illaa iyo haatan.
Vinicius ayaa Real ugu soo dhaqaaqay sanadkii la soo dhaafay adduun dhan 46 milyan oo euro laakiin wali ma uusan helin fursad fiican oo uu isku soo bandhigo xiddigan.
Dhanka kale Diaz ayaa 24 milyan oo euro ugu soo dhaqaaqay garoonka Bernabeu, isagoo ka yimid kooxda Manchester City, laakiin waxa uu ku dhibtooday inuu fursad fiican ka helo safka Real Madrid, isagoo kaliya hal kulan ka soo muuqday horyaalka La Liga xilli ciyaareedkan illaa iyo haatan.